नेपालले ओमानसँग हार्नुका पाँच कारण | Hamro Khelkud
नेपालले ओमानसँग हार्नुका पाँच कारण
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको दोस्रो खेलमा मंगलबार राती ओमानसँग ५ विकेटले पराजित भएको छ ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको १ सय ९७ रनको विजयी लक्ष्य ओमानले ३१.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो । ओमानको जितमा जतिन्दर सिंहले ६२ बलमा १२ चौका र ६ छक्का सहित सर्वाधिक १ सय ७ रनको विष्फोटक शतकीय इनिङ खेल्दै सहज जित दिलाएका थिए । जतिन्दरका सामू नेपाली बलर निरिह साबित बने । मोहम्मद नदिम ६५ बलमा २ चौका र १ छक्का सहित ३८ रनमा अविजित रहे ।
त्यसअघि अल अमरेत क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपाल ४७.४ ओभरमा १ सय ९६ रनमा अल आउट भएको थियो । नेपालका लागि आसिफ शेखले १ सय १२ बलमा ७ चौका र १ छक्का सहित सर्वाधिक ९० रनको योगदान दिए । पहिलो खेलमा अमेरिकामाथि सानदार जित हात पारेको नेपालको दोस्रो खेलमा प्रदर्शन कमजोर रह्यो ।
पाकिस्तानी खेलाडीको बाहुल्यता भएको ओमानले घरेलु मैदानको भरपूर्ण फाइदा उठाउँदै नेपालमाथि सहज जित निकाल्यो । मैदान भित्र र बाहिर नेपालका थुप्रै गल्तीहरु रहे । नेपालले ओमानसँग हार्नुका पाँच कारण यस प्रकार छन् ।
५. पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय
ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने जोखिम निर्णय लिएको थियो । ओमानले पछिल्ला दुई खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको २ सय माथिको योगफल सहजै पूरा गरेको थियो । गत वर्ष नेपालसँगको दोस्रो खेलमा ओमानले २ सय ५० रनको विजयी लक्ष्य ४७.२ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो । २०१८ मा ओमानले नेपालले प्रस्तुत गरेको २ सय २२ रनको विजयी लक्ष्य ४८ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा सजिलै पूरा गरेको थियो ।
ओमान लक्ष्य पछ्याउँदा निरन्तर सफल हुँदै आएको छ । २०१९ मा ओमानले खेलेका पाँच ओडिआई मध्य तीन खेलमा लक्ष्य पछ्याउँदा सहज रुपमा जित हात पारेको थियो । २०२० मा पनि ओमानले ६ ओडिआई खेल खेल्दा तीन खेलमा लक्ष्य पछ्याउँदा जित निकालेको थियो । अर्कोतर्फ नेपालले पहिलो खेलमा अमेरिकाविरुद्ध २ सय ३१ रनको विजयी लक्ष्य सफल रुपमा पूरा गरेको थियो ।
त्यसले गर्दा पनि नेपालको ध्यान लक्ष्य पछ्याउनेतर्फ हुनुपर्ने थियो । टस नेपालको पक्षमा आएपनि नतिजा ओमानतर्फ गयो । नेपालको बलिङ प्रमुख हतियार हुँदा पहिला गर्दै ओमानलाई औसत योगफलमा रोक्दै नेपालले लक्ष्य पछ्याउने रणनीति बनाएको भए सायद नतिजा अकै आउन सक्थ्यो ।
४. पावरप्लेमा खराब बलिङ
नेपालले राणनीति भन्दा ५० रन कम बनाएको थियो । नेपालको योगफल २ सय २० रनको आसपासनै हुने गर्दछ । त्यस लक्ष्यमा नेपालले जित निकाल्न सक्थ्यो । त्यसको लागि पावर प्लेमा सानदार बलिङ गर्दै दबाबमा राख्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपालको पावर प्ले सम्झन लायक रहेन ।
नेपालले आफ्नो ओेडिआई इतिहासकै खराब पावर प्लेमा बलिङ गर्दै सुरुवाती १० ओभरमा १ विकेट गुमाउँदै १ सय ८ रन खर्चेको थियो ।
त्यसपछि नेपाललाई खेलमा फर्कने कुनै मौका रहेन । बाँकी ८९ रन बनाउन ओमानले २१.१ ओभर सामना गर्नु परेको थियो । पावर प्लेमै दुई तीन विकेट लिँदै सानदार बलिङ गर्न सकेको भए नतिजा नेपालको पक्षमा आउन सक्थ्यो । दबाबमा विकेट गुम्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालका प्रमुख बलर सन्दीप लामिछाने पेटको अस्वस्थताको कारण बलिङ गर्न नसक्नुु ओमानलाई थप फाइदा मिल्यो ।
३. जतिन्दरको उत्कृष्ट शतक
ओमानको जितमा ओपनर जतिन्दर सिंह नायक बने । उनले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै एक्लै सहज जित दिलाए । जतिन्दरले दोस्रो ओभरमै विक्रम सोबलाई १८ रन प्रहार गरेका थिए । त्यो रनले उनको आत्माविश्वास झन् बढ्यो र आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । पाँचौं ओभरमा नेपालका प्रमुख तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीलाई तीन चौका र तीन छक्का सहित कुल ३० रन प्रहार गरेपछि नेपाली बलर पूर्णरुपमा दबाबमा परेका थिए ।
विष्फोटक ब्याटिङ गरेका उनले ३४ बलमै ८५ रन बनाएका थिए । नेपाली स्पिनरले राम्रो पूनरागमन गरेपनि उनले बाँकी १५ रन जोड्न २६ बल खेल्नु परेको थियो । जतिन्दरले ६२ बलमा १२ चौका र ६ छक्का सहित १ सय ७ रनको उत्कृष्ट शतकीय इनिङ खेल्दै टोलीको जित सहज बनाए । सुरुवातमै जतिन्दरको विकेट लिन सकेको भए नतिजा अकै हुन सक्थ्यो ।
२. आसिफले साथ नपाउनु
नेपालको हारको एक कारण आसिफ शेखले साथ नपाउनु हो । आसिफले एकतर्फबाट राम्रो इनिङ खेलेका थिए । तर अर्कोतर्फबाट लगातार विकेट गुमेको थियो । खराब सर्ट छनोट र गैर जिम्मेवारी ब्याटिङ ओमानविरुद्ध पनि निरन्तरता पायो । आसिफले एक्लै ९० रन बनाउँदा अन्य बाँकी १० खेलाडीले कुल ९९ रन बनाउन सकेका थिए ।
जसमा सन्दीप लामिछाने १६ र करण केसीको २१ गरि ३७ रन सामेल थियो । आसिफसँग राम्रो साझेदारी गर्ने कुनैपनि ब्याट्सम्यान हुन सकेनन् । ज्ञानेन्द्रले दोस्रो विकेटका लागि ५८ रनको साझेदारी गरेका थिए । रोहित र आसिफले तेस्रो विकेटका लागि ४२ रनको साझेदारी गरेका थिए । क्रिकेटमा साझेदारी बिना ठूलो योगफल बन्दैन । एक ब्याट्सम्यानको उत्कृष्ट प्रदर्शनले मात्र जित सम्भव हुँदैन । विशेष गरि प्रमुख ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र, कुशल र विनोद चल्न सकेनन् । जसको कारण कम योगफलमै समेटिएको थियो । जुन योगफल घरेलु टोली ओमानविरुद्ध जित निकाल्न पर्याप्त थिएन ।
१. पाँच ब्याट्सम्यान खेलाउने निर्णय
नेपालको हारको कारण कप्तान र टिम म्यानेजमेन्ट बढी लिनुपर्ने हुन्छ । ब्याटिङ नेपालको कमजोर पक्ष हो । तर नेपाल जम्मा पाँच ब्याट्सम्यानका साथ मैदान उत्रेको थियो । ओपनर आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी र रोहित कुमार पौडेल ब्याट्सम्यानको रुपमा थिए । नेपालले एक अतिरिक्त ब्याट्सम्यान खेलाउनु पर्ने थियो ।
अनुभवी शरद भेषावकर र आरिफ शेख राम्रो विकल्प थिए । शरद अनुभवी खेलाडी हुँदा दबाबमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्थे । टोलीमा युवा खेलाडीको बाहुल्यता हुँदा पनि शरदको आवश्यक देखिन्छ । शरद पार्टटाइम स्पिनरका रुपमा राम्रो विकल्प पनि हुन् ।
अमेरिकाविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका रोहित र कुशल ओमानविरुद्ध चाँडै आउट भए । आसिफले ९० रन जोड्दै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए । कप्तान ज्ञानेन्द्र २१ र विनोद भण्डारी ६ रनमा आउट भए । ज्ञानेन्द्र टोलीका प्रमुख ब्याट्सम्यान हुन् । तर लगातार असफल हुँदै आएका छन् । कुशल मल्ल, सोमपाल कामी र करण केसीलाई नेपालले बलिङ अलराउन्डरको रुपमा खेलाएको थियो ।
कुशल यसअघिका तीनै खेलमा एक एक रनमा आउट भएका थिए । ओमानविरुद्ध पनि ४ रनमा आउट भए । विक्रम सोब र सुशान भारी मध्य नेपालले एकलाई बेन्चमा राख्न सक्थ्यो । आरिफ शेख ब्याटिङ अलराउन्डरको राम्रो विकल्प थिए । अलराउन्डरमाथि बढी विश्वास र एक कम ब्याट्सम्यान खेलाउनु हारको कारण देखिन्छ ।
स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ओमानविरुद्ध खेलको सुरुवातमा नै घाइते भएपछि बलिङ गरेका थिएनन्